Jireenya Archives - Page 3 of 9 - Ibsaa Jireenyaa
Miira gadi aantummaa yommuu jennu namni tokko mataa ofii shakkuu, “Ani nama gadi aanaa amala cimaa fi ol’aanaa hin qabneedha.” Jedhee ofi ajifachuu fi of gadi xiqqeesudha. Miirri gadi aantummaa ijoollumma irraa jalqabee hanga du’aa kan itti fufu ta’uu danda’a. Miirri kuni nama dhuunfaa qofa osoo hin ta’in hawaasa fi biyya kan miidhudha. Biyyi gadi aantummaan itti dhagahamu biyya biraatif gabra fi kajeelattu taati. Miira gadi aantummaa bakka saditti qoonne mee haa ilaallu. Read more
November 25, 2017 Sammubani One comment
Torbaan darbee waa’ee amala gaarii fi ramaddii isaa kaasne turre. Yaadachisaf amala gaarii jechuun keessi fi hojiin namaa toluu fi bareedudha. Namni hanga fedhe fuulli isaa yoo fokkate, keessi fi hojiin isaa yoo bareede, Rabbii fi namoota biratti fudhatama kan argatu nama kana. Read more
Amala Gaarii-Kutaa 1ffaa
November 18, 2017 Sammubani Leave a comment
Gaalee husnul khuluq (amala gaarii) jettu gurri yommuu dhagahu, qalbiin ni mirqaanti. Inni/ishiin amala gaarii qaba/qabdi yommuu jedhamu, namoonni isa/ishii marsu, waliin hiriyyoomu barbaadu. Kanaafi, amalli gaariin sadarkaa ol’aanaa qabate. Garuu amala gaarii (husnul khuluq) jechuun maal jechuudhaa? Gosoonni isaa hoo maal fa’aa? Kana beeknaa laataa? In sha Allah har’a yeroo keenya kanarratti dabarsina. Wanta baranne immoo hojii irra oolchuf tattaafanna. Isin qophiidhaa? Haa jalqabnu… Read more
Suuratu Al-Faatihan “Faatiha” jedhamte tan moggaafamteef Qur’aanni waan ittiin banamuufi. Suuraa tana ilaalchisee Aalimman akki jedhan “Hiika Qur’aanaa tawhiida, Ahkaama (murtiwwaan), mindaa, daandii ilmaan Aadam fi kan biroo ilaalchise tan of keessatti cuunfite qabatteedha. Kanaafi, Ummul Qur’aan (Haadho Qur’aana)” jedhamte tan moggaafamteef.” Read more
Sadaqaa jechuun hojii gaarii kamiyyuu gara Rabbii ittiin dhiyaatun ajrii (mindaa) itti argataniidha. Fakkeenyaf, Subhaanallah, Alhamdulillah, Allahu akbar jechuun sadaqaadha, maallaqaan nama gargaarun sadaqaadha. Garuu yeroo baay’ee sammuu namaatti kan dhufuu maallaqa namoota harka qalleeyyitiif kennuudha. Eeti, sadaqaan isaan qofa irratti kan daangeefamu osoo hin ta’in firoota fi hawaasa bal’aaf gargaarsa fi deeggarsa kennu kan of keessatti hammatuudha. Read more
Jireenya Du’aan Boodaa
September 16, 2017 Sammubani Leave a comment
Dur irraa kaase hanga ammaatti gaafin, “Eessaa ka’ee garam deemaa jira?” jedhu sammuu dhala namaa dhamaasaa kan jiruudha. Deebii kanaa ima barbaadu. Garuu madda sirrii keessa waan hin barbaannef baay’een isaanii argachuu hin dandeenye. Gaafiin “Du’aan booda jireenyi ni jiraa?” jedhu wal-dhabbii fi mormii baay’ee kan kaase fi ammas kan kaasaa jiruudha. Namni erga du’ee ni kaafamaa moo akkanumatti biyyee ta’ee hafaa? Read more
Mana barnoota keessa taanee yommuu siviks barannu boqonnaan “Qusanna (Saving)” jedhu tokko hin hafu. Bara baraan boqonna kana barataa turre. Garuu wanti ach irratti barraa’u tiyoori qofa moo shaakala qabaa? Rakkoon mana barnootaa guddaan tiyoori qofaan sammuu hadoochu, barattoota shakalsiisun ykn akka shaakalan karaa itti agarsiisun hin jiru. In sha Allah har’a bal’innaanis ta’uu baatu hanga ta’e waa’ee qusannaa ni ilaalla. Read more
Daldala keessattis ta’ii jireenya keessatti namni tokko milkaa’uf amaloota filatamoo fi gaggaarii ta’an qabachun isarra jira. amaloonni kunniin takkaa uumaman takkaa immoo adeemsa keessa argamu. Namni amala badaa yoo qabaate jireenya keessatti milkaa’u akka hin dandeenye beekun amala badaa kana ofirraa kaasuf haa carraaqu. Namni tokko milkaa’uf xiqqaate xiqqaatu amaloota armaan gadii saddeet horachu qaba. Read more